Soo Saaraha Baaxadda Weyn ee ugu Fiican iyo Warshad | Yilibao
Badeecadani waa midab dhalaalaya, ma fududa in la libdho, xoog sare, anti-ma guurto ah, iska caabin abrasion, qorraxda iska caabin, gabowga iska caabin, crack iska caabin ah, qaab dhismeedka aamin iyo waara, iswaafajinta midabka midaysan, iyo isku darka xariif ah oo qaybo kala duwan caag ah, taas oo waxay u keentaa badbaado, farxad iyo nolol toos ah carruurta.
Xayeysiin Weyn 001
Xayeysiin Weyn 002
Isbadalku wuxuu aad muhiim ugu yahay koritaanka carruurta. Ciyaar iyo barasho waa habka ugu toosan ee lagu bixiyo xoogaa fursado iyo jawi wanaagsan, taas oo u suurta gelin karta iyaga inay gaaraan ujeeddada aasaasiga ah ee ciyaarta iyo barashada heerka koowaad ee nolosha. Cayaaraha dhexdooda, carruurtu ma jimicsi karaan oo kaliya jimicsiga jirka, kobcin karaan xirfadaha dhaqdhaqaaqa, kordhin karaan dheelitirka iyo iskuduwidda, laakiin sidoo kale waxay baran karaan isgaarsiinta, kicinta kartida, iyo hagaajinta garashada iyo xirfadaha luqadda inta lagu jiro howlaha bulshada.
Bear "Macaamiisha bilowga ah, oo tayo sare leh marka hore" maskaxda, waxaan si dhow ula shaqeynaa macaamiisheenna oo waxaan siineynaa adeegyo khibrad iyo khibrad leh leh oo loogu talagalay OEM Factory ee Shiinaha Foam Play Mat, baaritaankaaga waxaa si weyn loogu soo dhoweynayaa oo lagu daray guul-guul horumarka barwaaqadu waa waxa aan filayno.
OEM Price Factory, Waxaan rajeyneynaa inaan dhisi karno iskaashi muddo-dheer ah dhammaan macaamiisha. Waxaanan rajeyneynaa inaan horumarin karno tartanka oo aan ku guuleysan karno xaaladda guule-guuleysiga wadajirka ah macaamiisha. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa macaamiisha ka kala socda daafaha dunida si ay noola soo xiriiraan wax kasta oo aad u baahan tahay!
Waxaan ku raaxeysaneynaa sumcad aad u wanaagsan oo ka dhex jirta macaamiisheenna oo ku saabsan tayada wax soo saarkeenna aadka u wanaagsan, qiimaha tartanka iyo adeegga ugu fiican ee Dhimista Jumlada Shiinaha Soft Child Kid Play Gym Baby Sleeping Floor Mat, Waxaan soo dhaweyneynaa dukaamaysatada, ururada ganacsiga iyo saaxiibada ka socda dhammaan meelaha ka soo jeeda deegaanka inaad nala hadasho oo aan iskaashi ka raadinno wax wada qabsiga.
U adeegso kartoonka si aad u xirato
Xiga: Mat xujo EVA
Carruurta Caagga Ah
Caaga Caruurta Iskagajiraan